6 Talooyin SEO ah oo muhiim ah oo muhiim ah kasta oo kasta Smart Smart waa qasab
Ivan Konovalov, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt Hay'adda Digital waxay wadaagaan waayo-aragnimada ku saabsan sida loo abuuro waxtarkaHawlaha SEO ee shirkaddaada
Qaar ka mid ah shirkadaha Fortune 500 ee ugu wanaagsan uguna guulaystay adduunka maanta waxay leeyihiin hal shey oo caadi ah: badankoodawaxay leeyihiin website-ka sarreeya, taas oo macnaheedu yahay in website-ka rasmiga ahi uu ka muuqdo natiijooyinka ugu horreeya ee laga sameeyay mashiinnada raadintalaga bilaabo raadinta webka, gaar ahaan marka meel lagu daro jumlada raadinta. Si kastaba ha ahaatee, bogagga internetka ma ahan oo kaliya halkaassi macquul ah. Qaar ka mid ah khibradaha heerka sare ah ayaa la isticmaalay, nidaamyada la raacay, iyo falanqayn ayaa la sameeyay. Taasi waa waxa lagu sharraxaywaxa aan ku sameyneyno Semalt waa.
Qeexitaankiisa, raadinta mashiinka raadinta, oo sidoo kale loo yaqaano suuq-geynta raadinta ama SEO, waa habkakordhinta ama hagaajinta muuqaalka bogga internetka. Waxay ku lug leedahay cilmi-baarista muhiimka ah, oo wax ka beddeleysa nuxurka ereyada muhiimka ah,iyo isticmaalka istaraatiijiga ah ee website-yada si ay u soo jiidato isdhexgal dheeri ah, ROI, iyo daacadnimo ka jirta suuqa bartilmaameedka amadhagaystayaasha. Boggaga bulshada ayaa sidoo kale aad u muhiim ah marka ay timaado SEO. Tani waa kiiska, hoos ku qoran waa dhawr talooyin oo muhiim ah SEOwaxaa kugula taliyay Ivan Konovalov inaad ogtahay sida ganacsade caqli leh.
1. Dooro Xuquuqdaada Xaqiiqda
Qof kasta oo ugu yaraan astaamo ku saabsan waxa SEO yahay, guud ahaan, waxay u egtahay caddaynta ereyada muhiimka ah. Waxay yihiindadka wacyigelinta ah ee ololeyaasha SEO ee, gaar ahaan marka si habboon ku jira content. Sida xaqiiqda, matoorada raadinta ayaa dhalin karanatiijooyinka raadinta iyadoo lagu saleynayo isku-dhafka erayada ku qoran isticmaalaha internetka markaad fiirinaysid macluumaadka shabakadda. Helitaankaereyada muhiimka ah ee aad xaq u leedahay waxaa ka mid ah erayada muhiimka ah ee sheekada ama astaamahooda, taas oo suuqa aad diiradaagu kuugu qori doonto markaad raadineysoadeegga ama alaabada ay bixiso ganacsigaaga..Hal-abuurka qaar ayaa loo baahan karaa halkan, xitaa inkastoo hay'ad SEO ah oo xirfad lehwaxay kaa caawin kartaa sameynta istaraatiijiga muhiimka ah ee tartanka ku dhex jira suuqa.
2. Isticmaal Sawirada Sawirada iyo Fiidiyowyada SEO
Cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa in fiidiyoowga iyo sawiradu ay yihiin mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee suuqgeynta. Tani waa sababta oo ah inay yihiin kuwo is-dhexgal ahsoo jiidashada marka la barbardhigo qoraalka caadiga ah. Marka loo isticmaalo nuxurka, fiidiyowyada iyo sawiradu waa kuwa waxtar leh. Waxay sidoo kaleka tago xusuusta joogtada ah ee maskaxdaada suuqa. Si kastaba ha noqotee, carruurtan waa in ay la socdaan mashiinka raadintakeydinta iyo keyword keyword qoraalka ah, sheeg sharaxaadda iyo macluumaadka la xiriira fariinta ugu weyn ee la gudbiyeyololaha gaar ah ee SEO. Qaar badan oo macaamiisha internetka ah iyo dadka isticmaala internetka ayaa saameyn ku leh inay talaabo qaadaaniyo cajaladaha fiidiyowga / sawirada, sidaas darteed hubi inaad isticmaasho waxa ugu fiican ee aad heli karto.
3. Kala-doorta Website-kaaga Mashiinnada Raadinta Badan
Ganacsi caqli-gal ah, ma khaldami doonto inaad ku qaadato inaad horey u ogaato in ay tahay aduunka mobile-ga aanu ku noolahay. Inta badan isticmaalayaasha internetkaee maanta iyo da'da waqti dheeraad ah ku qaataan qalabkooda mobile, oo ay ku jiraan casriga ah iyo kiniiniyada, marka la barbar dhigo desktopkombiyuutarada iyo laptop PC. Si aan ugu lumin qaybta weyn ee keeggaaga tartankaaga, hubi inaad wax ka beddeshowebsite-kaaga loogu talagalay laqabsashada telefoonka.
Haddii si kale loo dhigo, boggagaaga waa in laga helaa qalab mobile oo aan lahayn dhibaatooyin ama dhibaatooyin. Habkani, adigadaawadayaasha ama bartilmaameedka suuqa ayaa awood u leh inay helaan macluumaad muhiim ah ama iibsashada alaabooyinka / adeegyadaada goorta. Hal ma ahansug ilaa inta ay ka joogaan xafiiska si ay u dalban karaan pizza qaar ka mid ah, taas oo ka dhigan in ay tahay khadkaaga ganacsiga. Inta badan sidan oo kaleee naqshadeynta naqshadda webka, haysashada SEO-saaxiibtinimo, nuqulka mobile-ka ee website-kaaga ayaa kugu abaal marin doona.
Inkastoo shaki kuma jiro in Google uu yahay boqorada makiinadaha raadinta, tiro dad ah ayaa sidoo kale door bidaya doorashooyin kale sida Bing iyo Yahoo,kaliya in la xuso dhowr. Ma rabtid in aad ukumahaaga ku riddo hal sanduuq. Si aad u hesho soo-celin wanaagsan oo ku saabsan maal-galinta SEO, hubi inaad soo gudbisogoobtaada si aad u hesho ciyaartoyda kale ee warshadaha raadinta iyo sidoo kale, labada xayeysiis dabiiciga ah iyo lacag bixiya..Xaaladdan, waxay noqon lahayd mid caqli lehbaro wax ama laba shay oo ku saabsan sida matoorada raadinta kala duwan bogaga internetka.
5. Indhahaaga ku hay SEO-ga gudaha
Maadaama ay hay'ad samafal ahi ka bilaabantay gurigeeda, ganacsigu wuxuu si sahlan uga dhigi doonaa suuqa internetka iyada oo aan laga helin istaraatiijiyad guuleysi ah oo loogu talagalay SEO-ga deegaanka, gaar ahaanhaddii ay tahay bilawga. Sida ganacsade caqli-gal ah, waxaa muhiim ah in la ogaado in suuqyadaada degaanka ay go'aan ka gaari karaan haddii ganacsigaadu tahayama aysan ku guuleysan doonin internetka xudduudaha. Badanaa waxa ay ku saabsan tahay in ay soo saarto tareenka sida ugu badan ee suurtogalka ah ee suurtogalka ah ee boggaagaraadinta maxalliga ah, oo ah mid aad u culus marka ay timaaddo raadinta moobiilka.
Si aad u hesho dadaalka ugu wanaagsan ee aad raadineyso mashiinka raadinta, waa wakhti aad u tixgelisay isticmaalka wicitaanada ganacsiga deegaanka. Awoodagoobaha buugga sida yellow pages, Yelp, iyo shabakadaha kale ee buugaagta ayaa sidoo kale soo geli kara. Waa muhiim inaad mar walba hubisoMacluumaadka ganacsigaaga ee liisaska degaankaagu waa mid joogto ah oo sax ah, gaar ahaan sida loo ilaaliyo sida ganacsigaaga 'xiriirka iyofaahfaahinta cinwaanka waxaa lagu taxay meelo kala duwan oo internetka ah.
6. Ha sugin ilaa laga gaaro boggagaaga Maqnaanshaha
Haa, waxaad horay u soo dejisay maqaallo qurxoon iyo bogga internetka ee boggaga hore; laakiin taasi macnaheedu maahan in cusboonaysiintama noqon doonto lagama maarmaan ilaa dhammaadka wakhtiga. Qof kasta oo haysta waxbarashada aasaasiga ah ayaa isku raaci doona in macluumaadka qaar uu noqdo mid aan habooneynwaqti leh. Gaar ahaan marka ay timaaddo daawadayaasha internetka iyo dukaamada webka, ma rabtid inaad ka tagto iyaga oo aan loo baahnayn. Soo gudbinta macluumaad cusub,content, iyo xog muhiim ah kasta oo kasta oo ka dibna ganacsigaaga ku sii hayn doona ciyaarta, gaar ahaan marka ay timaado gaadiidka webka iyo mashiinka raadintaqiimeynta. Kaliya inaad hubiso inaad had iyo jeer bixiso waxyaabo macno leh oo xiiso leh in suuqa ama bartilmaameedkaaga aad ka heleyso caawinaad iyo dhiirigelin.I aamin, content waa boqor, oo aadan ka qoomameyn doonin dadaalkaaga SEO.
Inkastoo aan si fiican u fahmin dad badan, SEO waa qayb muhiim ah oo ah guusha ganacsi kasta oo leh hawlo online ah. Iyada oo raadin cad oo la socdaistaraatejiyadda mira dhalinta, waxay timaaddaa gaadiidka intaa ka sii badan, qiimayaasha sare ee Google, iibka intaa ka badan, iyo koboc aad u badan ganacsigaaga, gaar ahaan internetkahawlaha. SEO waxay heli kartaa farsamo iyo waqti-qaadashada marxaladda qaarkood, sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad maalgashato hay'ad SEO ah si aad u hesho ugu badanee ganacsigaaga internetka Source .